Fivavahana 10 manankarena indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Ny fifandraisana misy eo amin'ny harena sy ny fivavahana dia taolana fifandirana nandritra ny taona maro. Rehefa dinihina tokoa, ny fivavahana dia rafitra ara-kolotsaina izay matetika misy finoana ny hery mihoatra ny natiora ary mety mikasa ny hanome rafi-pitondran-tena na dikany fiainana. Ampy ny milaza fa ny fivavahana dia tokony hino ny finoana sy ny ara-panahy avokoa. Na izany aza, ny fivavahana dia mitovy amin'ny fikambanana hafa manana fidiram-bola sy fandaniana. Noho izany, azonao atao ny mieritreritra ny fivavahana voarindra tahaka ny orinasa. Ny harena dia ny maha-mpahazo tombony na tompona fananana harena an-drenivohitra sy toekarena. Na ahoana na ahoana, dia misy fivavahana maro any izay fikambanana manankarena tokoa.
Ireto ny fivavahana 10 manankarena indrindra eto an-tany.
1. fiangonana katolika romana
3. Fivavahana jiosy
4. Fiangonan'i Jesosy Kristy an'ny Olomasin'ny Andro Farany
5. Fiangonan'i Angletera
9. Kristianisma tsy antokom-pinoana
10. Fiangonan'ny Scientology
Ny fiangonana katolika dia heverina ho fikambanana manankarena indrindra manerantany. Mety hiteny ianao fa io no fahefana ara-bola lehibe indrindra eto an-tany. Noho izany, na inona na inona eritreritrao momba ny lafiny ara-pinoana dia tsy maintsy mankafy ny taratasy fandanjana ianao. Ny teti-bolan'izy ireo dia an-jatony miliara dolara, izay ambony lavitra noho ny sasany amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany. Izy no angamba antokom-pivavahana malaza indrindra eran'izao tontolo izao, sady manana vola ara-bola sy ara-batana ny fiangonana. Tsy dia mahagaga raha nanao an-tampon'ny fivavahana manankarena indrindra eto an-tany ny fiangonana. Izany dia vokatry ny antokom-pinoana malaza indrindra eto an-tany.
Ny haren'ny fiangonana dia mitoetra eo amin'ny tantarany, nanomboka tamin'ny sangan'asa tsy voavidim-bola hatramin'ny fananana fizahantany voalohany, ny fivavahana dia afaka nanamboatra fidiram-bola tsy tapaka izay nahasarika ny mpikambana miliara amina miliara. Ny fiangonana katolika dia manana ny sangan'asa kanto indrindra vita teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Izy io koa dia manana tahiry volamena be dia be ary fananana an'arivony tapitrisa dolara. Ny fiangonana dia mahazo karama be ihany koa amin'ny sehatry ny fizahan-tany satria i Vatican dia heverina ho fanjakana mahaleo tena.
Amin'ny resadresaka dia ambany ny vidin'ny mpiasa ao aminy, satria rehefa mivoaka ny antso dia manao voady fahantrana ny pretra sy masera ary tsy manana na inona na inona izy ireo. Ny fahafolonkarena dia mamporisika ny fampianaran'ny fiangonana, ary raha manao matematika amin'ny mpikambana iray tapitrisa ianao, izany dia be ny vola azo hiaraha-miasa. Sarotra ny ahazoana tarehimarika momba ny fananan'ny fiangonana, fa ny Vatican kosa dia feno fananana sy fampiasam-bola amin'ny fiarovana miliara dolara. Ny tarehimarika dia voasarona amin'ny tsiambaratelo, saingy ny haben'ny mpikamban'ny fiangonana dia manome antoka fa maitso foana izy io.
Ny finoana silamo dia fivavahana iray monotheistic izay iray amin'ny fitomboana haingana indrindra eto an-tany. Ny ankamaroan'ny harem-pinoana dia manamarina fa misy izany any amin'ny ankamaroan'ny firenena manankarena solika eto amin'ny planeta - dia ny Moyen Orient. Tsy takona afenina fa ny firenena manankarena sasany manerantany dia ao amin'ny faritra kely amin'ny Moyen Orient. Ny fipetrahan'ny empira solika, Moyen Orient dia mariky ny harena nandritra ny taona maro izao. Amin'ny maha-manjaka ny finoana silamo ao amin'io faritra io dia toy izany koa ny antony manosika ny antony mahatonga ny fivavahana ho laharana faharoa amin'ity faribolana ity. Ny Silamo dia tsy manana lalàna mandrara ny fitadiavana harena, ary ny ampahany betsaka amin'ny silamo dia tonga manan-karena.
Ny jiosy dia efa nifamatotra tamin'ny harena. Ireo izay manaraka ny fivavahana jiosy dia voalaza fa nanangona harena be indrindra tamin'ireo mpino rehetra tao amin'ny fivavahana eran'izao tontolo izao. Tsy stereotype profiling io, satria ny jiosy dia fantatra fa mahay amin'ny tontolon'ny asa. Na dia monoteistista ihany ny fivavahana jiosy dia tsy homogenous izy satria manana fomba fijery maro samy hafa. Ny renirano sy ny hetsika lehibe indrindra dia ny Fivavahana jiosy Rabbinianina, ny fivavahana jiosy ortodoksa, ny jiosy konservativa ary ny fivavahana jiosy fanavaozana. Ankoatry ny tanindrazany any Israel, ny mpikambana ao aminy koa dia manana fitafiana ara-toekarena ampy any Etazonia mba hamoronana lobby mahery izay afaka mitaona sy manova ny fanapahan-kevitr'ireo mpitondra politika.
Ny Fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany dia vondrona ara-pivavahana miavaka, izay heverina ho iray amin'ireo fivavahana mitombo haingana sy manankarena indrindra eto an-tany. Antsoina hoe Mormons ny mpikambana ao ary hita hatraiza hatraiza, hatrany Scandinavia ka hatrany Japon. Manakaiky ny 90% ny volan'ny fiangonana dia avy amin'ny fandraisana anjaran'ny mpikambana antsoina hoe fahafolonkarena, izay takian'ny mpikambana hanome 10% ny karamany manontolo.
Amin'ny lafiny iray, ny fiangonan'i Angletera koa dia endrika protestanta. Izy io dia noforonina ihany noho ny fanirian'ny mpanjaka anglisy, Henry VIII, hisaraka amin'i Catherine avy any Aragon. Zavatra tsy homen'ny Eglizy Katolika azy. Na dia nanomboka toy izany aza izy ireo dia nitombo ny vatana anglikana. Fantatra ihany koa amin'ny anglikanisma, ny fiangonana manangona fidiram-bola an-jatony tapitrisa isan-taona amin'ny alàlan'ny harona fahafolonkarena.
Ny fiangonana Episkopaly dia naorina tany Etazonia tamin'ny 1785 ary manamarika ny niandohany tamin'ny Fiangonan'i Angletera tany amin'ireo zanatany Amerikanina. Ny fiangonana nisaraka tamin'ny Anglikanisma ho klerjin'ny Eglizy Anglikanina dia natao hianiana ny tsy fivadihan'ny mpanjaka britanika. Ankoatra an'i Etazonia, dia nitatra tamin'ny firenena samihafa eran'izao tontolo izao. Ny mpikambana ao aminy angamba no tsara indrindra any amin'ireny firenena ireny, ary izany dia manankarena amin'ny fivavahana.
Ny andriamanitra rehetra amin'ny Hindoisma dia miaina amin'ny harena. Ny Hindiusm dia miorim-paka ao amin'ny finoana fa ny harena sy ny harena dia fanomezana avy amin'ireo andriamanitra. Raha ny marina, ny andriamanitra Hindou dia miaina amin'ny harena sy harena, ary fanomezana be dia be ho an'ny haingo hindoa sy fankasitrahana ny effigies ho azy ireo. Tsy mahagaga raha ny Hindoisma dia iray amin'ireo fivavahana manankarena indrindra manerantany. Ny etona Hindou dia tokony hikatsahana tsy tapaka ny fahatsiarovan-tena sy ny fahalalàny tena, ka tsy rafitra iray izay "tamponanao tampony". Ny tanjona dia ny hahitana harena ara-tsaina sy ara-batana amin'ny alàlan'ny fombafomba ara-pinoana hindoa, ary miaraka amina fohy fohy, fikatsahana fiainana iray manontolo izany.
Ny Protestantisme dia fizarana iray an'ny Kristianisma izay be mpanaraka azy. Ny fivavahana protestanta dia ny fisarahana tamin'ny fanjakan'ny toerana any Vatikana ankehitriny. Raha ny marina dia misy antokom-pivavahana rehetra eo amin'ny tontolon'ny kristiana izay mandà ny fahefan'ny papa any Roma. Ny fivavahana dia efa nisy nanomboka tamin'ny taonjato faha-16. Manamafy ny fitsipiky ny fanavaozana izany ary mino ny maha-lohalaharana ny Baiboly ho loharano hany fahamarinana. Ny Protestanta dia miantehitra tanteraka amin'ny Baiboly amin'ny fitarihana azo ampiharina, tari-dalana azo ampiasaina ary fiangonana protestanta maro dia miankina amin'ny fanomezana vola sy fanoloran-tena mahomby koa. Ireo antony ireo dia nahatonga ny fivavahana ho iray amin'ny mpanankarena indrindra manerantany.
Ny Kristiana tsy manana antokom-pinoana dia manaraka ny fomba fototra iorenan'ny protestanta nefa tsy iharan'ny fanekem-pinoany. Ny sekta ara-pinoana dia nahita fitomboan'ny isan'ny mpikambana noho ny fitomboana sy ny fampiakarana fiangonana mega erak'izao tontolo izao. Misy ihany koa ny antso maoderina sy laika an'ny Kristianisma tsy antom-pinoana. Mpitandrina maro izay manangana fiangonana amin'ny alàlan'ity fivavahana ity dia miankina betsaka amin'ny fahafolonkarenan'ny mpiangona ao aminy ho an'ny vola mitentina. Ny mahavariana dia ny ankamaroan'ny fiangonana toy izao dia manankarena noho ny fanoloran-tenan'ny mpikamban'izy ireo raha ny tolotra am-piangonana no resahina.
Ny Church of Scientology dia natokana ho an'ny fampiroboroboana ny rafi-pinoana siantifika. Nanangana ny fivavahana i L. Ron Hubbard tamin'ny 1952, izay nihataka tamin'ny fandaharan'asa fanampiana azy manokana antsoina hoe Dianetics. Ny fivavahana Scientology dia miasa amin'ny alàlan'ny famandrihana, izay misy mpikambana ao amin'ny fiangonana miakatra ambony ao amin'ny fiangonana amin'ny alàlan'ny fandoavana ny sarany takiana. Fametrahana tsy mahazatra ho an'ny fikambanana ara-pivavahana izy io, saingy nahasarika olona malaza maro eran-tany izany. Mpikambana be no miakatra amin'ny laharana. Ny saram-pisoratana anarana dia mahatsikaiky, saingy manome anao fahadiovan'ny vatana sy fanahy ianao raha mifikitra aminy. Rehefa mandoa vola ianao dia afaka mampiakatra ny laharan'ny fiangonana mahazo ny fanajanao sy ny fahadiovanao bebe kokoa. Azo antoka fa fomba iray tsara ahazoana vola ho an'ny fiangonana izany.
Fiangonana 10 manankarena indrindra eran-tany 2022
Jankel brian hoy:
Jona 27, 2022 amin'ny 1: 15 am
Jona 27, 2022 amin'ny 1: 16 am